အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်(မာတိကာ) | Event in American events
Sunday, 19. June 2022, American events, အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်(မာတိကာ)
from 19. June 2022 - 0:00
25121 people attending
က ကော် ကိုင်း ကုပ် ကျီ ကျက် ကျန် ကြိ ကြောက် ကြပ် ကွင်း ကြွေ
ကာ ကံ ကိစ် ကမ် ကျီး ကျောက် ကျန်း ကြီး ကြိုက် ကြမ် ကွန် ကြွေး
ကား ကံ့ ကဏ် ကမ်း ကျူ ကျင် ကျိန် ကြေ ကြင် ကြမ်း ကွန့် ကြွက်
ကိ ကို ကတ် ကုမ် ကျူး ကျင့် ကျိန်း ကြေး ကြောင် ကြိမ် ကွပ် ကြွင်း
ကီ ကိုး ကိတ် ကုံ ကျေ ကျင်း ကျပ် ကြဲ ကြောင့် ကြိမ်း ကွမ်း ကြွပ်
ကု ကက် ကုတ် ကုံး ကျေး ကျောင်း ကျုပ် ကြော့ ကြောင်း ကြုံး ကွယ် ကြွယ်
ကူ ကောက် ကန် ကယ် ကျဲ ကျိုင်း ကျမ်း ကြော် ကြဉ် ကြယ် ကျွေး
ကူး ကိုက် ကန့် ကိုယ် ကျော ကျစ် ကျုံ့  ကြံ ကြည် ကွာ ကျွဲ
ကေ ကင် ကန်း ကိုယ့် ကျော့ ကျဉ် ကျုံး ကြံ့  ကြည့် ကွီ ကျွန်
ကဲ ကင်း ကိန်း ကျ ကျော် ကျဉ်း ကျယ် ကြို ကြည်း ကွေ့  ကျွန်း
ကဲ့ ကောင် ကုန် ကျာ ကျို ကျည် ကြ ကြို့  ကြိတ် ကွေး ကျွမ်း
ကော ကောင်း ကုန်း ကျား ကျို့  ကျည်း ကြာ ကြိုး ကြုတ် ကွဲ ကြွ
ကော့ ကိုင် ကပ် ကျိ ကျိုး ကျိတ် ကြား ကြက် ကြန့် ကွက် ကြွား
ခ - အက္ခရာစသော
ခ ခက် ခန် ချူ ချင့် ချိန် ခြောက် ခွေ ချွတ်
ခါ ခေါက် ခန့် ချေ ချင်း ချိန်း ခြင် ခွေး ချွန်
ခါး ခိုက် ခန်း ချေး ချောင် ချပ် ခြင်း ခွဲ ချွန်း
ခု ခင် ခုန် ချဲ ချောင်း ချိပ် ခြစ် ခွံ့  ခြွေ
ခူ ခင်း ခပ် ချဲ့  ချိုင့် ချုပ် ခြည် ခွက် ခြွင်း
ခူး ခေါင် ခမ်း ချော ချိုင်း ချမ်း ခြုတ် ခွင့်
ခဲ ခေါင်း ခုံ ချော့ ချစ် ချုံ ခြမ်း ခွင်း
ခေါ ခိုက် ခုံး ချော် ချဉ် ချုံ့  ခြိမ့် ခွန်
ခေါ် ခိုင် ခယ် ချို ချဉ်း ချယ် ခြိမ်း ခွန်း
ခံ ခိုင်း ချ ချို့  ချည် ခြ ခြုံ ခွပ်
ခံ့ ခတ် ချာ ချိုး ချည့် ခြား ခြယ် ချွေ
ခို ခုတ် ချီ ချက် ချိတ် ခြေ ခွ ချွေး
ခိုး ခေတ် ချီး ချောက် ချန် ခြံ ခွာ ချွဲ
င ငဲ့ ငင် ငပ် ငြာ ငြိမ် ငှက်
ငါ ငေါ ငေါင်း ငုပ် ငြိ ငြိမ့်
ငါ့ ငေါ့ ငိုင် ငမ်း ငြီး ငြိမ်း
ငါး ငံ ငတ် ငုံ ငြိုး ငွေ
ငု ငို ငုတ် ငုံ့ ငြင်း ငှ
ငူ ငေါက် ငန် ငုံး ငြောင့် ငှား
ငေး ငိုက် ငန်း ငယ် ငြမ်း ငှဲ့
စ စူ စံ စင် စစ် စဏ် စုန် စိမ့် စွဲ စွန်း
စာ စူး စို စင်း စဉ် စိတ် စုန်း စိမ်း စွံ စွပ်
စား စေ စို့ စောင် စဉ့် စုတ် စပ် စုံ စွက် စွမ်း
စိ စေ့ စိုး စောင့် စဉ်း စန် စိပ် စုံး စွင့် စွယ်
စီ စေး စက် စောင်း စည် စန့် စုပ် စွာ စွတ်
စီး စော စောက် စိုင် စည့် စန်း စမ်း စွေ စွန်
စု စော် စိုက် စိုင်း စည်း စိန် စိမ် စွေ့ စွန့်
ဆ ဆူး ဆံ့ ဆင် ဆိုင်း ဆုတ် ဆမ်း ဆိမ့် ဆွေ့
ဆာ ဆေး ဆို ဆင့် ဆစ် ဆန် ဆုံ ဆွေး
ဆား ဆဲ ဆို့ ဆင်း ဆည် ဆန့် ဆုံး ဆွဲ
ဆီ ဆော ဆိုး ဆောင် ဆည်း ဆန်း ဆယ် ဆွံ့
ဆီး ဆော့ ဆက် ဆောင့် ဆဋ္ဌ် ဆပ် ဆယ့် ဆွတ်
ဆု ဆော် ဆောက် ဆောင်း ဆတ် ဆိပ် ဆွ ဆွမ်း
ဆူ ဆံ ဆိုက် ဆိုင် ဆိတ် ဆုပ် ဆွေ ဆွယ်
ဇ ဇူ ဇောက် ဇမ္ဗူ ဇွန်
ဇာ ဇော ဇောင်း ဇိမ် ဇွန်း
ဇိ ဇော် ဇစ် ဇယ်
ဇီ ဇိုး ဇာတ် ဇွဲ
ဇီး ဇက် ဇန် ဇွတ်
ဈာ ဈေး ဈာန်
ဉာ ညံ ညင်း ညန် ညှီ ညှောင့်
ဉာဏ် ညံ့ ညောင် ညပ် ညှော် ညှစ်
ည ညို ညောင်း ညွှတ် ညှို ညှဉ်း
ညာ ညို့ ညစ် ညွန် ညှို့ ညှပ်
ညား ညိုး ညဉ့် ညွန့် ညှိုး ညွတ်
ညိ ညက် ညည်း ညှာ ညှက် ညွန်
ညီ ညင် ညိတ် ညှိ ညှင်း ညွှန်း
ဍ (n) thirteenth letter of the Myanmar apphabet
ဍရင်ကောက်ပင် (n) vegetable fern(Diplazium esculentum) / wild fern
ဎ (n) fourteenth letter of the Myanmar alphabet
ဃ (n) fifteenth letter of the Myanmar alphabet
တ တူ တော တက် တောင်း တတ် တိန်း တိမ်း တွေ တွတ်
တာ တူး တော့ တောက် တိုင် တိတ် တုန် တုံ့ တွေ့ တွန်
တား တေ တော် တိုက် တိုင်း တုတ် တပ် တုံး တွေး တွန့်
တိ တေ့ တံ တင် တစ် တန် တိပ် တယ် တွဲ တွန်း
တီ တေး တို တင့် တည် တန့် တုပ် တြိ တွက် တွပ်
တီး တဲ တို့ တင်း တည့် တန်း တမ်း တွာ တွင် တွယ်
တု တဲ့ တိုး တောင့် တည်း တိန် တိမ် တွား တွင်း တောင်
ထူ ထံ ထိုက် ထိုင် ထန် ထမ်း ထွား ထွန်
ထာ ထူး ထော် ထင် ထိုင်း ထန်း ထိမ် ထွေ ထွန့်
ထား ထေ ထို ထင့် ထစ် ထိန် ထိမ်း ထွေး ထွန်း
ထိ ထေ့ ထို့ ထင်း ထည် ထိန်း ထုံ ထွက်
ထီ ထေး ထိုး ထောင် ထည့် ထပ် ထုံး ထွင်
ထီး ထော ထက် ထောင့် ထိတ် ထိပ် ထယ် ထွင်း
ထု ထော့ ထောက် ထောင်း ထုတ် ထုပ် ထွာ ထွတ်
ဒ ဒူး ဒို့ ဒင်း ဒဏ် ဒုန်း ဒွိ
ဒါ ဒေ ဒိုး ဒေါင် ဒုတ် ဒုံ ဒွေး
ဒိ ဒေါ ဒက် ဒေါင့် ဒန် ဒုံး ဒွန်
ဒီ ဒေါ့ ဒုက် ဒေါင်း ဒန့် ဒယ် ဒွန်း
ဒီး ဒေါ် ဒေါက် ဒိုင် ဒန်း ဒုသ်
ဒု ဒံ ဒိုက် ဒိုင်း ဒိန် ဒြပ်
ဒူ ဒို ဒင် ဒိ ဒိန်း >>>>>အညွှန်းပါဝေါ်ဟာရများရှာရန်>>>
ဓ ဓူ ဓမ်
န နူ နံ နင် နည်း နပ် နုံ့ နွဲ့ နှူး နှိုး နှောင် နှုန်း နွှာ
နာ နူး နံ့ နင့် နတ် နုပ် နုံး နွံ နှေး နှက် နှောင့် နှပ် နွှေး
နား နေ နို နင်း နုတ် နိဗ် နယ် နွမ်း နှဲ နှောက် နှောင်း နှိပ် နွှဲ
နိ နေ့ နို့ နောင် နန့် နမ်း နျူး နွယ် နှဲ့ နှိုက် နှိုင်း နှမ်း နွှင်
နီ နဲ့ နိုး နိုင် နန်း နိမ့် နွား နှ နှော နှင် နှစ် နှိမ် နွှယ်
နီး နော နက် နိုင်း နုန့် နာမ် နွေ နှာ နှံ နှင့် နှုတ် နှိမ့်
နု နော် နောက် နစ် နုန်း နုံ နွေး နှီး နှံ့ နှင်း နှန့် နှယ်
ပ ပေါ ပင်း ပိတ် ပုပ် ပျူ ပျဉ် ပြေ ပြောင်း ပြုံး ပွိုင့်
ပါ ပေါ့ ပေါင် ပုတ် ပိမ့် ပျော့ ပျဉ် ပြေး ပြိုင် ပြယ်
ပါး ပေါ် ပေါင်း ပုဒ် ပုံ ပျော် ပျဉ်း ပြဲ ပြစ် ပြဿ ပွန်း
ပိ ပံ့ ပိုင် ပိုဒ် ပုံ့ ပျံ ပျပ် ပြော ပြည် ပွ ပြွတ်
ပီ ပို ပိုင့် ပန် ပုံး ပျံ့ ပျမ်း ပြို ပြည့် ပွား ပြွန်
ပု ပို့ ပိုင်း ပန်း ပယ် ပျို ပြ ပြိုး ပြန် ပွေ ပြွမ်း
ပူ ပိုး ပစ် ပိန် ပလ် ပျို့ ပြာ ပြက် ပြန့် ပွေ့
ပူး ပက် ပုစ် ပိန့် ပုလ်္လ ပျိုး ပြား ပြောက် ပြိန် ပွေး
ပေ ပေါက် ပဉ္စ ပိန်း ပိဿ ပျက် ပြီး ပြိုက် ပြိန်း ပွဲ
ပေး ပိုက် ပဏ် ပုန် ပျ ပျောက် ပြု ပြင် ပြုန်း ပွဲ့
ပဲ ပင် ပုဏ် ပုန်း ပျာ ပျင်း ပြူ ပြင်း ပြုပ် ပွက်
ပဲ့ ပင့် ပတ် ပပ် ပျား ပျစ် ပြူး ပြောင် ပြုံ ပွင့်
ဖ ဖေး ဖောက် ဖိတ် ဖုံ ဖျက် ဖျန်း ဖြို ဖြန့် ဖွဲ့
ဖာ ဖဲ ဖင် ဖုတ် ဖုံး ဖျောက် ဖျပ် ဖြိုး ဖြန်း ဖွံ့
ဖား ဖဲ့ ဖင့် ဖန် ဖယ် ဖျင် ဖြာ ဖြောင် ဖြုန်း ဖွင့်
ဖိ ဖော ဖောင် ဖန့် ဖျ ဖျင်း ဖြား ဖြောင့် ဖြုံ ဖွတ်
ဖီ ဖော့ ဖောင့် ဖိန်း ဖျာ ဖျောင်း ဖြီး ဖြိုင် ဖွ ဖွပ်
ဖီး ဖော် ဖောင်း ဖုန် ဖျား ဖျစ် ဖြူ ဖြစ် ဖွာ ဖွယ်
ဖု ဖို ဖိုင် ဖုန်း ဖျော့ ဖျဉ် ဖြူး ဖြည့် ဖွား
ဖူ ဖို့ ဖိုင့် ဖပ် ဖျော် ဖျဉ်း ဖြေ ဖြည်း ဖွေ
ဖူး ဖိုး ဖည် ဖမ်း ဖျံ ဖျတ် ဖြဲ ဖြတ် ဖွေး
ဖေ ဖက် ဖတ် ဖိမ့် ဖျိုး ဖျန် ဖြော ဖြုတ် ဖွဲ
ဘ ဘူ ဘို့ ဘိုင် ဘိန်း ဘွား
ဘာ ဘူး ဘိုး ဘဏ် ဘုန်း ဘွဲ့
ဘား ဘေ ဘက် ဘတ် ဘမ်း ဘွင်း
ဘိ ဘေး ဘင် ဘိတ် ဘုမ် ဘွိုင်
ဘီ ဘဲ ဘင်း ဘုတ် ဘုံ ဘွတ်
ဘီး ဘော ဘောင် ဘန် ဘယ်
ဘု ဘော် ဘောင်း ဘန်း ဘယ့်
မ မော မောင် မေတ် များ မြေ မြင်း မြုပ် မှီ မှိုင် မြွေ မြှောင်
မာ မော့ မောင်း မန် မျော မြေး မြောင် မြုံ မှီး မှိုင်း မြွက် မြှုပ်
မိ မော် မိုင် မန်း မျို မြဲ မြောင်း မြုံ့ မှု မှည့် မျှ မြှုံး
မီ မံ မိုင်း မာန် မျိုး မြော မြိုင် မွ မှေး မှတ် မျှား မွှား
မီး မို့ မစ် မိန် မျက် မြော့ မြစ် မွေ မှဲ့ မှိတ် မျှော မွှေ
မု မိုး မိစ် မိန့် မျောက် မြော် မြည် မွေ့ မှော် မှုတ် မျှော့ မွှေ့
မူ မက် မဉ် မိန်း မျဉ်း မြို့ မြည့် မွေး မှို မှန် မျှော် မွှေး
မူး မောက် မည် မုန် မြ မြိုး မြည်း မွဲ မှို့ မှန်း မျှင် မွှတ်
မေ မိုက် မည်း မုန့် မြား မြက် မြတ် မွတ် မှက် မှိန် မျှစ် မွှန်း
မေ့ မုခ် မဏ် မုန်း မြီ မြောက် မြိတ် မွန် မှောက် မှိန်း မြူ မွှမ်း
မေး မဂ် မတ် မယ် မြီး မြိုက် မြန် မွန်း မှင် မှုန် မြှေး မြွှာ
မဲ မင် မိတ် မိလ် မြူ မြင့် မြန်း မှာ မှောင် မှုန့် မြှောက်
မဲ့ မင်း မုတ် မိဿ မြူး မြင့် မြိန် မှား မှောင့် မှုန်း မြှိုက်
ယ ယေ ယောက် ယဇ် ယန်း ယွင်း ယှဉ်
ယာ ယဲ့ ယင် ယဉ် ယုန် ယွတ်
ယား ယော ယင်း ယဉ့် ယပ် ယွန်း
ယီး ယို ယောင် ယဉ်း ယမ်း ယွမ်
ယု ယို့ ယောင်း ယာဉ် ယိမ် ယှိ
ယူ ယိုး ယိုင် ယုတ် ယုံ ယှေ
ယူး ယက် ယစ် ယဒ် ယွက် ယှက်
ရ ရု ရို့ ရောင် ရုတ် ရမ် ရွေး ရွယ် ရှဲ ရှင့် ရှန့် ရှယ်
ရာ ရူ ရိုး ရောင့် ရုဒ် ရမ်း ရွဲ ရှ ရှော ရှင်း ရှိန် ရွှေ
ရိ ရူး ရက် ရောင်း ရန် ရုံ ရွဲ့ ရှာ ရှော် ရှောင် ရှိန်း ရွှေ့
ရီ ရေ ရိက္ခာ ရိုင် ရန့် ရုံး ရွံ ရှား ရှံ ရှောင်း ရှပ် ရွှဲ
ရီး ရေး ရုက္ခ ရိုင်း ရန်း ရယ် ရွံ့ ရှိ ရှို့ ရှစ် ရှုပ် ရွှဲ့
ရဲ ရောက် ရစ် ရုန့် ရဿ ရွက် ရှီ ရှိုး ရှဉ့် ရှမ် ရွှင်
ရော ရိုက် ရဉ် ရုန်း ရွ ရွိုင် ရှူ ရှက် ရှည် ရှမ်း ရွှတ်
ရော် ရင် ရည် ရပ် ရွာ ရွတ် ရှူး ရှောက် ရှိတ် ရှိမ်း ရွှန်း
ရံ ရင့် ရည်း ရိပ် ရွေ ရွပ် ရှေ့ ရှိက် ရှုတ် ရှုံ့ ရွှပ်
ရို ရင်း ရိတ် ရုပ် ရွေ့ ရွမ်း ရှေး ရှင် ရှန် ရှုံး ရွှမ်း
လ လေး လိုက် လည်း လာဘ် လျော့ လွတ် လှေ လှိုင်း လှုံ့ လျှင်း ၁၂
လာ လဲ လဂ် လိုဏ် လမ်း လျော် လွန် လှေ့ လှစ် လှယ် လျှပ် ၁၂
လား လဲ့ လင် လတ် လိမ် လျက် လွန့် လှေး လှည့် လျှာ လျှမ်း ၁၂
လိ လော လင့် လုတ် လိမ့် လျောက် လွန်း လှဲ လှည်း လျှော လွှ ၁၂
လီ လော့ လင်း လဒ် လိမ်း လျင် လွမ်း လှော် လှန် လျှော့ လွှာ ၁၂
လီး လော် လိင် လန် လုံ လျောင်း လွယ် လှံ လှန့် လျှော် လွှား ၁၂
လု လံ လောင် လန့် လုံ့ လျစ် လှ လှောက် လှန်း လျှံ လွှဲ ၁၂
လူ လို လောင်း လန်း လုံး လွေ့ လှာ လှိုက် လှပ် လျှို လွှံ့ ၁၂
လူ့ လို့ လိုင် လိန်း လယ် လွေး လှီ လှင် လှုပ် လျှို့ လွှင့် ၁၂
လူး လိုး လိုင်း လပ် လျ လွဲ လှီး လှောင် လှမ်း လျှိုး လွတ် ၁၂
လေ လက် လစ် လိပ် လျာ လွင် လှု လှောင်း လှိမ့် လျှောက် လွှမ်း ၁၂
လေ့ လောက် လည် လုပ် လျား လွင့် လှူ လှိုင် လှုံ လျှင်
၀ ဝေ ၀ံ့ ၀င် ၀ဋ် ၀န်း ၀ဿာ ၀ှက်
၀ါ ဝေ့ ၀ိုး ၀င့် ၀ဏ္ဏ ၀ုန်း ဝေဿ ၀ှန်
၀ါး ဝေး ၀က် ၀င်း ၀တ် ၀ပ် ၀ှီး ၀ှန်း
၀ိ ၀ဲ ၀ိုက် ၀ိုင် ၀တ္တာ ၀မ် ဝှေ့ ၀ှမ်း
၀ီ ဝေါ ၀ဂ် ၀ိုင်း ၀ုတ် ၀မ်း ဝှေး
၀ူး ၀ံ ၀ိဇ် ၀န် ၀ယ် ၀ှဲ
သ သူ သော့ သက် သင်း သုဉ် သတ် သန် သုန်း သိမ် သွာ သွင် သွယ်
သာ သူ့ သော် သိက် သိင်္ဂ သုဉ်း သတ္တ သန့် သပ် သိမ့် သွား သွင်း သျှား
သား သေ သံ သုက် သောင် သဉ် သုတ် သန်း သိပ် သိမ်း သွေ သွတ် သျှို
သိ သေး သံ့ သောက် သောင်း သည် သေတ္တာ သိန် သုပ် သုံ့ သွေ့ သွန် သျှိုး
သီ သဲ သို သိုက် သိုင်း သည့် သဒ္ဒ သိန်း သောပ္ပ သုံး သွေး သွန်း သျှီ
သီး သဲ့ သို့ သင် သစ် သည်း သိဒ္ဓိ သုန် သမ် သယ် သွံ သွပ် သျှောင်
သု သော သိုး သင့် သဉ္စ သဏ် သုဒ္ဒ သုန့် သမ်း သွ သွက် သွမ်း သျှတ္တ
ဟ ဟိ ဟေ ဟော့ ဟက် ဟောင် ဟတ် ဟိန်း ဟုံး
ဟာ ဟီ ဟေ့ ဟော် ဟောက် ဟောင်း ဟိတ် ဟုန် ဟုမ်း
ဟား ဟီး ဟေး ဟံ ဟိုက် ဟိုင်း ဟုတ် ဟုန်း ဟယ်
ဟု ဟဲ ဟို ဟင် ဟစ် ဟန် ဟပ် ဟဿ
ဟူ ဟဲ့ ဟို့ ဟင့် ဟည် ဟန့် ဟုပ် ဟွန်း
ဟူး ဟော ဟိုး ဟင်း ဟည်း ဟိန် ဟုံ
ဠ (n) thirty-second letter of the Myanmar alphabet.
ဠကြီး (n) name of the thirty-second letter of the Myanmar alphabet.
(အ အီး အဲ အို အင် အိုင့် ဧည့် အိတ် အန်း အမ်း အဿ
အာ ဥ အော အိုး အင့် အိုင်း အဋ္ဌ ဣတ္ထိ အုန် အိမ် ဣဿ
အား အူ သြ အက် အင်း အစ် ဣဋ္ဌာ အုတ် အုန်း ဥမ္မ ဥဿ
အိ ဦ အော့ ဥက္က အောင် ဣစ္ဆာ သြဋ္ဌ ဥတ္တ အပ် အုံ
၏ ဦး အော် အောက် အောင့် ဥစ် အဏ် သြတ္တ အိပ် ဥုံ
ဣ ဧ သြော် အိုက် အောင်း အဇ် ဥဏ္ဏ ဣဒ္ဓိ အုပ် အုံး
အီ အေ့ အံ အဂ္ဂ သြောင်း အဉ္စ အတ္တ ဥဒ္ဒေ အဗ္ဘု အယ်
ဤ အေး အံ့ အိုင် အဉ့် အန် အမ် အလ္လာ)
၁၇-နိူင်ငံတော်အဖွဲအစည်းများနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများ-၁ မှ၂၂
၁၆-မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဟာ ၁၃၅ မျိုး
၁၅-မက်ဇူကာဘတ်ပြောသော ဟက်ကာ အဓိပ္ပါယ်
၁၂-၂၄ ပစ္စည်း ( မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်)
၇-ဟင်းသီး ဟင်းရွက် အခေါ်အဝေါ်များ
၅-ငါးပါးသီလ ( English- ပါ ဠိ- မြန်မာ)
၃-နေ့စဉ်သုံး လျှပ်တစ်ပြက် အင်္ဂလိပ်ဝါကျများ
၂-အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေသူအဖို့တော့ ရွှေအိုးတူးမိ Cambridge စာအုပ်ကောင်းများ
၁-အလွန်တန်ဖိုးရှိသောစာအုပ်များ ဘာသာပြန် စာအုပ် (၁၃၀ အုပ်)
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်(မာတိကာ), American events event